Falanqeyn: Yeyyihiin kooxaha ku dagaalamaya Liibiya iyo dowladdaha kala taageera ? Halkeese ayay ku dambayn doontaa xaalada dalka Liibiya? (dhegayso) – Radio Daljir
Abriil 19, 2019 6:05 b 0
Dagaalka ka socoda dalka Liibiya ayaa waxaa ku dhintay in kabadan 18kun oo qof sida ay xaqiijisay Qaramada Midoobay wuxuuna dagaalkan uu u dhexeeyaa xukuumada ay caalamka aqoonsanyihiin iyo korneel Khaliifa Haftar.
Xeel dheerayaasha falanqeeya xaalada siyaasadeed ee cakiran ee dalkaasi ayaa waxa ay ka deyrinayaan jawareerka siyaasadeed ee dalkaasi ka taagan.
Liibiya ayaa gashay dagaalo sokeeye wixii kadambeeyay sanadii 2011kii,dagaaladaas oo ay ku dhinteed dad aad ufarabadan kadib markii xilka laga tuuray madaxweynihii dalkaasi Mucamar Al-Qadaafi oo dalka Liibiya xukumayay mudo 40 sano ah.
Hadaba halkee ayay ku dambayn doontaa xaalada Liibiya? yayse tahay cida ku dagaalamaysa Liibiya iyo dowladdaha kala taageera? waxaa arimahaasi ka jawaabaya Cabdisataar Cabdilaahi Jaamac oo ah cilmi baare ka tirsan Machadka Jaamacada Carata ee magaalada Qaahira.